Sidee Abaabulka Isbeddelka Cimilada “Pet a Tree” u Caawin doonaa Dalxiiska Uganda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Sidee Abaabulka Isbeddelka Cimilada “Pet a Tree” u Caawin doonaa Dalxiiska Uganda
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Dalxiiska Uganda "Pet a Tree"
Hindisaha isbeddelka cimilada ee “Pet a Tree” ayaa waxaa Uganda ka bilaabay Wasiiru Dowlaha Dalxiiska, Mudane Martin Mugarra Bahinduka, oo ah hindise ay soo saartay hay’ad aan dawli ahayn oo Afrika u qaabilsan Dalxiiska iyo Bay’ada Ogosto 5, 2021, Xarunta Waxbarashada Duurjoogta Uganda (UWEC) ee Entebbe.
Wasiirku intuu daah -furayey hindisaha, wuxuu ballanqaaday inuu taageero buuxda siin doono ururka.
Mashruucu wuxuu si toos ah ugu hoos imanayaa Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Uganda oo ah 40 milyan oo olole geed.
Wasiirka ayaa ku dheeraaday in xiriirka ka dhexeeya dalxiiska iyo deegaanka uu yahay mid ku tiirsan duurjoogta oo u baahan geedaha si ay u noolaadaan. Markaa waxaa loo baahan yahay in la keydiyo geedaha hore u jiray iyadoo wax badan la beerayo.
Deegaanku, sida dabiiciga ah, dhaqanka-taariikhiga ah, kartida cimilada bulsheed, wuxuu matalaa dhiirrigelinta socdaallada dalxiisayaasha, halka jawi nadiif ah oo aan la beddeli karin uusan jiri karin iyada oo aan lagu dhaqmin dalxiiska deegaanka.
Agaasimaha Dalka ee Sanduuqa Duurjoogta Adduunka ee Uganda (WWF), Mr. David Dduli, ayaa u mahadceliyay aasaasayaashii "Pet a Geed" si loo dhasho hindisahan aadka u wanaagsan, waxayna ka go'an tahay taageeridda ururka tallaabada looga golleeyahay dib u soo celinta geedka. “Waxaa loo baahan yahay in la abaabulo dhallinyarada si ay ugu biiraan hindisaha. Magacyada xayawaanka ayaa had iyo jeer ka mid ahaa dhaqanka Afrika, waxayna abuurtaa isku xirnaan. Aynu isticmaalno 'Pet a Tree' si aan ugu soo celinno dhaqanka magacyada xayawaanka, ”ayuu yiri Duli. "Waxaan ku taaganahay fursad ay awoowayaasheen heleen oo lumiyeen, waana fursad aan hadda dib ugu abuuri karno jiilalka soo socda."
Guddoomiyaha Guddiga Hindisaha Dalxiiska iyo Deegaanka, oo sidoo kale ah Guddoomiyaha Guddiga Ururka Milkiilayaasha Hoteellada Uganda, Marwo Susan Muhwezi, ayaa u mahadcelisay Hay'adda Qaranka ee Kaymaha (NFA), WWF, UWEC, iyo Wasaaradda Dalxiiska Duurjoogta iyo Antiquities ee lagu taageerayo hindisaha cajiibka ah ee xoogga saaraya dib u soo celinta noolaha. Waxay ka hadashay sida ay si joogto ah ugu taageertay dadaallada noocaas ah iyada oo awoodeeda shaqsi ahaan u sii wadata. Ms.
Agaasimaha Fulinta ee UWEC, Dr. James Musinguzi, ayaa kula taliyay dadka reer Uganda inay caado ka dhigtaan inay beeraan geedaha waqtiyada gaarka ah sida aroosyada, maalmaha dhalashada, iwm. laga yaabee markii ugu horeysay taariikhda aadanaha. Waxaan u baahannahay inaan qirno caqabadda hoose ee isbeddelka cimilada. ”
Wasiiru -dowlaha Deegaanka, Mudane Beatrice Anywar, waxaa wakiil ka ahaa Stuart Maniraguha, Agaasimaha Dhirta ee NFA, oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la beero ugu yaraan 124 hektar oo dhul ah sannad walba tallaabadaas oo ujeedkeedu yahay in dib loo soo celiyo daboolkii kaynta ee lumay. Wuxuu sheegay in muddo 30 sano gudahood ah, tirada dadka geedka ahi ay hoos uga dhacday 24% ilaa 8% laakiin wuxuu leeyahay hadda waxaa jira rajo rajo leh oo leh dadaalladaas. Saameynta ayaa la dareemayaa iyada oo la gaarsiiyay 10% daboolidda kaynta, wuxuuna ballan -qaaday taageerada NFA ee ololaha “Xayawaanka Geedka”. Wuxuu kaloo ku baaqay in la cusbooneysiiyo wacyigelinta iyo ka qeybgalka qof kasta oo reer Uganda ah iyo urur kasta si ay ugu biiraan ololaha isbeddelka cimilada oo ah tallaabo ujeedkeedu yahay soo celinta dabeecadda.
Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Tooro, Joan Else Kantu, oo wakiil ka ah boqortooyada ayaa ololaha “Pet a Tree” ku bixisay 5 hektar oo dhul ah si loogu beero kaynta Tooro iyadoo la adeegsanayo magacyada xayawaanka Tooro. “Waxaan dhageysaneynaa qaylada dabeecadda. Kayntani waa in la hubiyo in carruurta ay dhaleen ay u qaddariyaan noolaha sida aan ugu raaxaysannay. ”
Amumpaire Moses Bismac, Aasaasaha “Pet a Tree” iyo Hindisaha Dalxiiska iyo Bay’ada Afrika, ayaa mahadcelin u jeediyay hay’adaha dowladda ee WWF, Maamulka Kaymaha Qaranka, Xarunta Waxbarshada Duurjoogta Uganda, iyo Maamulka Duurjoogta Uganda ee taageera ololaha “Pet a Tree”. Wuxuu ugu baaqay saxafiyiinta kale iyo dhammaan dadka reer Uganda inay ugu yaraan yeeshaan hal geed Pet. "Si gaar ah, waxaan u bogaadinayaa taageerada WWF ee ku aaddan dadaallada deegaanka iyo taageerada ololahan 'Pet a Tree'."
Dalka Ugandha, Boqortooyada Bunyoro-Kitara, oo ka mid ah hay'adaha dhaqanka ee dalka ayaa ku habboon in la beero geedo halkii laga samayn lahaa ubaxyo lagu aasi lahaa hindisaha Omukama (King) Solomon Gafabusa Iguru I si dib loogu dhiiri geliyo boqortooyada, dhaqanka oo tan iyo markaas xididdada dhowrkii sano ee la soo dhaafay.